people Nepal » प्रियंकाले किन फिर्ता गरिनन् पाहुनाले छाडेको ज्याकेट ? गज्जबको खुलासा प्रियंकाले किन फिर्ता गरिनन् पाहुनाले छाडेको ज्याकेट ? गज्जबको खुलासा – people Nepal
प्रियंकाले किन फिर्ता गरिनन् पाहुनाले छाडेको ज्याकेट ? गज्जबको खुलासा
मुम्बई, १५ जेठ । हालैमा प्रियंका चोपडाले हलिउडको शो ‘डर्टी लन्ड्री’मा आफ्नो निजी जिन्दगीबारे अचम्मको खुलासा गरेकी छन् । उक्त शोमा उनले एउटा ज्याकेटको रहस्य खोलेर सबैलाई अचम्मित पारेकी हुन् । उनले भनिन् की उनीसँग उनको पूर्वप्रेमीको ज्याकेट अझै पनि छ जुन उनले सम्हालेर राखेकी छन् ।
प्रियंकाका अनुसार उनको प्रेमीले उनको घरमा सो ज्याकेट छाडेका थिए र उनलाई त्यो यति मन परेको थियो की उनले ज्याकेट फिर्ता गर्न चाहिनन् । उनका प्रेमीले मागेपनि उनले त्यसलाई आफैँसँग राखिन् र बेलाबखत त्यही ज्याकेटमा देखिने पनि गरेकी छन् ।
उनले यसरी त्यस ज्याकेटबारे खुलासा गर्नासाथै एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले एउटा फोटो उनलाई ट्याग गर्दै लेखेका थिए की आखिर प्रियन्काले शाहरुख आफ्नो पूर्वप्रेमी रहेको कुरा स्वीकारिन् । यस फोटो र कमेन्टलाई पहिले त प्रियंकाले लाइक गरिन् ।
उनले सो पोस्ट लाइक गरेपछि यो कुरा अब पुष्टि भइसकेको सबैले प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर फेरि केहि समय पछि प्रियंकाले उक्त पोष्टलाई अनलाइक पनि गरिन् । यसो गरेर उनले सबैका सामु आफ्नो र शाहरुखको सम्बन्धबारे अप्रत्यक्ष रुपमा सबैलाई बताएकी छन् ।